118% yakabaiwa Gibraltar inodzima Kisimusi pamusoro peiyo COVID-19 spike
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » 118% yakabaiwa Gibraltar inodzima Kisimusi pamusoro peiyo COVID-19 spike
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Entertainment • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
118% yakabaiwa Gibraltar inodzima Kisimusi pamusoro peiyo COVID-19 spike.
Vanopfuura 118% yevagari vemuGibraltar vanobaiwa zvizere kurwisa Covid-19, nenhamba iyi inodarika zana nekuda kwedosi rinopihwa vanhu vekuSpain vanoyambuka bhodha kunoshanda kana kushanyira ndima mazuva ese.
Huwandu hwevanhu vakuru vemuGibraltar hwakabaiwa nhomba kubva munaKurume, 2021.
Masks achiri kudiwa muzvitoro uye pazvifambiso zvevoruzhinji muGibraltar.
Saizvozvo nyika dzakadzivirirwa zvakanaka dzakataurawo nezvekuwedzera kwehutachiona hweCovid-19 nguva pfupi yadarika.
Vakuru vehurumende yeGibraltar vakazivisa kuti mapato ese epamutemo eKisimusi, mabiko ehurumende uye kuungana kwakafanana kwakamiswa.
Veruzhinji vakayambirwawo zvakasimba kuti vasiyane nemitambo yekutandara nemapati kwemavhiki mana anotevera. Pazviitwa zvese zveboka, nzvimbo dzekunze dzinokurudzirwa pamusoro pedzemukati, kubata uye kumbundirana kunoshorwa, uye kupfeka mask kunorairwa.
Vese vanokodzera veGibraltar vanobaiwa, asi pakati pekuvhiya kweCCIDID-19 kesi, Gibhurata vakuru vakuru havasi kutora mukana nezviitiko zvakawanda zveKisimusi.
"Kuwedzera kwakanyanya kwevanhu vanoongororwa kuti vane CCIDID-19 mumazuva achangopfuura chiyeuchidzo chakasimba chekuti hutachiona huchiri kutekeshera munharaunda medu uye kuti ibasa redu tose kutora matanho ane musoro kuti tizvidzivirire uye kuti tizvidzivirire. vadikani vedu, "Gurukota rezvehutano Samantha Sacramento akadaro.
Gibhurata, Kanzvimbo kadiki keBritish Overseas Territory kanogovera muganhu wenyika Speini, yaona avhareji yemakumi mashanu nenhanhatu eCCIDID-56 makesi pazuva mumazuva manomwe apfuura, kubva pasi pegumi pazuva munaGunyana. Kukwira kwenyaya, kwakatsanangurwa nehurumende se "exponential," kunouya kunyangwe Gibraltar iine mwero wepamusoro wekudzivirira pasi rose.
Vanopfuura 118% yevagari vemuGibraltar vanobaiwa zvizere kurwisa COVID-19, nenhamba iyi inodarika zana kubva muzana nekuda kwedosi rinopihwa vanhu vekuSpain vanoyambuka muganhu kunoshanda kana kushanyira ndima mazuva ese. Vese vanhu vakuru veGibraltar vakabayiwa nhomba kubva munaKurume, uye masiki achiri kudiwa muzvitoro uye pazvifambiso zveveruzhinji.
Gibraltar parizvino iri kupa madosi ekuwedzera kune vanopfuura makore makumi mana, vashandi vehutano, uye mamwe 'mapoka ari panjodzi,' uye nekupa majekiseni kuvana vane makore ari pakati pemashanu negumi nemaviri.
Saizvozvowo nyika dzakadzivirirwa zvakanaka dzakataurawo nezvekuwedzera kwehutachiona hweCCIDID-19 nguva pfupi yadarika.
MuSingapore, uko 94% yevagari vanokodzera vakaiswa jekiseni, nyaya nerufu zvakakwira kurekodha zvakakwirira pakupera kwaGumiguru, uye kubva zvino zvadzikira zvishoma.
MuIreland, uko vanosvika 92% yehuwandu hwevanhu vakuru vakabaiwa zvizere, nyaya dzeCCIDID-19 uye kufa kubva kuhutachiona zvakapetwa kaviri kubva Nyamavhuvhu.
Deb Dhamasiko anoti:
Zvita 7, 2021 pa11: 22
Hapana anodzima kisimusi mugibraltar. Iro fakenews mbeveve. Minister vakataura chokwadi munhau itsva nekuti vakaona zvakataurwa nevanhu vasinganzwisisi nezvazvo
BOOSTER-ul FUNCȚIONEAZĂ DE MINUNE DAR NUMAI DUPĂ CE FACI VREO 7: Gibraltarul vaccinat în proporție de 118% Crăciunul din cauza unui nou focar de COVID-19 - Mucenicul's Blog anoti: